Maxamuud Maxamed oo Muqdisho jooga ayaa warkan wax ka qoray
Jannaayo 25, 2012
Weeraradii in dhawaale lala beegsanayay xeryaha dadka barakacay Muqdisho ayaa waxay sababeen walwal laga qabo saamaynta uu dagaalku ku yeelan karo hawlaha gargaarka iyo nolosha kumaanka dadka Soomaalida ah ee ka cararaya degaanka ay maamulaysay al-Shabaab.
Askari ka tirsan ciidanka ammaanka oo ilaalinaya xerada qoxootiga dadka barakacay ee Muqdisho bishan Janaury 17-keedii. [Tony Karumba/AFP] Qodobbo la xiriira
Roobab ka da’ay koofurta Soomaaliya oo saamayn ku yeeshay barakacayaasha
Xayiraada al-Shabaab ku soo rogtay Hay’ada Bisha cas oo cirka ku sii shareertay cabsida laga qabo dhicitaanka dhibaato bani'aadanimo
Ugu yaraan sagaal qoxootiga ka mid ah -- oo intooda badani ahaayeen carruur iyo haween -- ayaa la soo wariyay in la dilay Axadii (bishan Janaayo 22-keedii) ka dib markii dhowr madfac ay ku dhaceen xerada qoxootiga Siliga oo ku taala koonfurta magaalada Muqdisho, ka dib weerar ay xoogagga al-Shabaab ku qaadeen goob dadka lagu baaro oo ay ka shaqaynayeen ciidamo ka tirsan dawladda oo u dhawaa xerada qoxootiga. Qarax ayaa gilgilay goob bilaysku dadka ku baaro uu ku taalay xerada qoxootiga kaasi oo dhacay bishan Janaayo 19-keedii, waxyar ka dib markii shakhsiyaad ka socday Qaramada Midoobay iyo wariyayaal caalami ahi booqdeen halkaasi oo dadka qoxootiga ah cunto loogu qaybinayay muddo lix bilood ah ka dib markii lagu dhawaaqay in Soomaaliya ay macaluuli ka jirto. Sida laga soo xiganayo ila-wareedyo iyo waliba goob-joogayaal, qaraxu wuxuu dilay lix qof shan kalena wuu dhaawacay.
Sidoo kale, 19-kii bishan January ayay dagaal kooxda al-Shabaab iyo ciidamada dawladda iyo jaalkooda AMISOM ku dhex-maray agagaarka xerada barakacyaasha badbaado ayaa waxa uu sababay dhaawaca tiro ka mida barakacayaasha. Badbaado waa mid ka mida xeryaha ugu waawayn ee barakacayaasha waxana ku nool tobonaan kun oo Soomaaliya. Sida ay warbaahintu sheegtay, dagaalada ka dhacay goobta u dhow xerada Badbaado waxay dhaceen daqiiqado ka dib markii masuuliyiin ka socday hay’adaha samafalka Qaramada Midoobay iyo koox wariyayaal ahi ka tageen xerada. Masuuliyiinta ka socday Qaramada Midoobay iyo wariyayaashi waxay booqanayeen xerada qoxootiga si ay ugu kuur galaan hawlaha qaybinta cuntada ee dadka barakacay. Hay’adaha samafalka ee caalamiga ah iyo dawladda Soomaaliya ayaa cambaareeyay weerarada lagu qaaday xeryaha qoxootiga IDP iyo shaqaalaha hay’adaha samafalka.
Wasiir ku xigeenka Warfaafinta Bile Nuur Cabdilaahi ayaa cambaareeyay weerarada "quusta ah” ee ka dhanka ah goobaha ay deggan yihiin dadka aan awoodda lahayn iyo sidoo kale weerarada lagula kacayo dadka aan waxba galabsan ee masaakiinta ah, gaar ahaan dadka qoxootiga ah".
Sacdiyo Macaw, oo ku nool xerada qoxootiga Siliga, ayaa Sahabi u sheegtay, "In dadka soo barakacay ay ka walaacsan yihiin in shaqaalaha hay’adaha samafalka ee u yimiday inay ayaga caawiyaan la bar tilmaansado."
Axmed Cabdilaahi, oo u shaqeeya hay’ad samafal oo waddani ah oo qandaraas ka qaadatay Barnaamijka Cuntada Aduunka ee Qaramada Midoobay, ayaa sheegay in al-Shabaab, oo wali ka talisa goobo ka mid ah gobollada dhexe iyo kuwa koonfureed ee Soomaaliya, ay tahay caqabadda ugu wayn ee ku aaddan hawlaha bani aadaminimo si loo gaaro dadka baahan. Wuxuu sheegay in tirada dadka helaya cuntadu ay hoos ugu dhacday 21% bishii Diisambar iyadoo taasi ay ugu wacan tahay saamaynta tooska ah ee ay ku yeelatay xayiraadda al-Shabaab ku soo rogtay hay’adaha samafalka caalamiga ah. "Shaki kuma jiro in weerarada ka dhanka ah shaqaalaha hay’adaha samafalku ay sii adkaynayso hawlaha bani aadaminimo iyo in sahaydu gaarto dadka u baahan," ayuu Cabdilaahi u sheegay Sabahi. "Tani waxay hor istaagaysaa fulinta mashaariicda samatabixinta ah. "
Al-Shabaab waxay xayiraad ku soo rogtay bishii la soo dhaafay ee Noofambar 16 hay’adaha samafalka ah inay ka hawlgalaan Soomaaliya , taasoo ah tallaabo ay masuuliyiinta Soomaaliya iyo hay’adaha samafalku ay aad u cambaareeyeen.
"Aad baan uga xumaaday arintaasi laakiin lama yaabin dhawaaqa naxariis darada ah ee ka soo yeeray al-Shabaab/al-Qaeda ee ay ku joojinayaan shaqada hay’adaha samafalka inay fidiyaan gargaarka aadka loogu baahnaa ee la siinayo kumaan Soomaali ah wakhti dalku bartanka kaga jiro dhibaato bani aadam. " Madaxweynaha Soomaaliya Shariif Sheekh Aadan ayaa sheegay Noofambar 29-keedii, hal maalin ka dib markii xoogagga al-Shabaab ay weerareen dhowr xafiis oo ay lahaayeen haya’daha samafalku. Al-Shabaab waxay sheegtay in hay’adaha samafalka caalamiga ahi ay samaynayaan " dhaqdhaqaaqyo lid ku ah gaarida hadafka maamul Islaami ah". Kumanaan dad ah ayaa khatar ku sugan
Shaqaalaha hay’adaha samafalku waxay ka digeen in xayiraadda lagu soo rogay ay khatar galinayso kumanaan carruur iyo haween ah. Xayiraadda ka dib, tiro yar oo ka mid ah hay’adaha samafalka ayaa sii joogay goobaha ay al-Shabaab ka taliso, taasi oo ay ku jiraan Ururka Bisha Cas ee Caalamiga ah iyo Dhakhaatiirta Aan Xuduudka lahayn ee (MSF). Si kastaba ha ahaatee, sii socodka weerarada ka dhanka ah shaqaalaha hay’adaha samafalku wuxuu sababay in qaar ka tirsan hay’adaha samafalka ee caalamiga ay hoos u dhigaan hawlahoodii shaqo sababo la xiriira xaaladda ammaan ee sii xumaanaysa. MSF waxay ku dhawaaqday in Janaayo 19-keedii ay joojinayso qayb ka mid ah hawlihii ay ka waday magaalada Muqdisho ka dib markii laba ka mid ah shaqaaleheedii ajnabiga ahaa Muqdisho lagu dilay Diisambartii la soo dhaafay. "Aad ayay u adag yahay in la xiro hawlaha adeegyada caafimaadka goobohaasi oo joogitaanka shaqaalahayaga caafimaad ay dadka noloshooda ku badbaadinayaan maalin kasta," maamulaha ururka Christopher Stokes ayaa warbixin sidaasi ku sheegay. Sida ay sheegayso warbixin ay bishii Diisambar 2011-kii soo saartay Xarunta La socodka Dadka Barakacay, hal malyan iyo bar dad gaaraya ayaa ku barakacay gudaha Soomaaliya sababo la xiriira dagaallada ka dhex socda xoogagga al-Shabaab iyo ciidamada AMISOM ee taageeraya kuwa Soomaaliya. In badan oo ka mida dadka barakacay ayaa ka cararay degaannada magaalooyinka ka baxsan ee hoos imaanayay maamulka al-Shabaab. Inta badan waxay ku nool yihiin guryo ku meel gaar ah oo dadku aad uga tiro badan yihiin oo ku yaala magaalada Muqdisho, kuwaasi oo dhawaan laga xoreeyay gacanta al-Shabaab, iyagoo dadka intooda badani ay aad ugu baahan yihiin cunto, biyo nadiifa, musqulo, daryeel caafimaad, waxbarasho, iyo ammaan.
Masuuliyiin ka tirsan hay’adaha samafalka wadaniga ah ayaa sheegay in xanibaadda ay al-Shabaab saartay goobihii ay sahaydu soo maraysay ay uga sii dartay xaaladda degaannada ay wali maamusho kooxda al-Shabaab. "Aad baan uga walaacsanahay waxa ka socda Kismaayo, "Cabdilaahi Shirwac, oo ah gudoomiyaha Waaxda Maaraynta Masiibooyinka Qaranka ee Soomaaliya, ayaa sheegay bishii Diisambar sida laga soo xigtay wakaaladda wararka ee IRIN. " Al-Shabaab waxay is hortaagtay isku day kasta oo samalka lagu marsiin karo waddada iyada oo dhinaca kalena weerarada lagu hayo garoonka diyaaradaha iyo dekadda in ay xirmato ku dhowna ay kaga sii dareen cunto yaraanta ba'an ee ka taagan magaalada." Soomaaliya waxaa loo tixgaliyaa inay ka mid tahay meelaha ugu khatarta badan dunida ee shaqaalaha hay’adaha samafalka.
Inkasta oo ay jiraan weeraro dhacay, ayaa Wakiilka Gaarka ee Qaramada Midoobay u qaabilsan Soomaaliya Augustine Mahiga waxa uu Talaadadii ku dhawaaqay dib u furida Xafiiska arrimaha Siyaasada oo ay Qaramada Midoobay ku yeelan doonto Soomaaliya, magaalada Muqdisho, kadib 17 sano oo ay halkaa ka maqnaayeen. "Joogitaanka Muqdisho wuxuu noo ogolaan doonaa inaan si dhow ula shaqayno Dawladda Dhexe, hay’adaha Qaramada Midoobay iyo haya’adaha aan dawliga ahayn ee imikaba dalka ku sugan, bulshada rayidka ah iyo dadka Soomaaliyeed ee caadiga ah," ayuu Mahiga sheegay, isagoo muujinaya rajo ah in talaabadani " ay nqoon doonto bilowga rajo ka soo cusboonaatay mustaqbaka Soomaaliya". Ma jeclaysatay maqaalkan?
Waa maxay dembiga ay galab sadeen kumanaanka qof ee ku waayay noolashooda? Yaase dhabarka u ridanaya dambiga laga galay? Waxaan ognahay in aysan helin wax gar-gaar ah sababtuna ay tahay in kooxda Al-shabaab ay ka talinayso deegaanadan mana oggola in gargaarka la gaarsiiyo.